ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်း ရန်ကုန်မြစ်ထဲပြုတ်ကျတဲ့ မြင့်မြတ် - APANNPYAY
Home / သရုပ်ဆောင်များ / ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်း ရန်ကုန်မြစ်ထဲပြုတ်ကျတဲ့ မြင့်မြတ်
ရုပ်ရှင်ရိုက်ရင်း ရန်ကုန်မြစ်ထဲပြုတ်ကျတဲ့ မြင့်မြတ်
Original Gangster2ရိုက်ကူးရာမှာ မြင့်မြတ်တစ်ယောက်ရေထဲပြုတ်ကျခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် ။
Original Gangster2ရဲ့ Offical Page က ထို Video ကိုတင်ထားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ။
"သင်သိပါသလား? ရန်ကုန်မြစ်လိုရေရှင်မှာ ရေထဲပြုတ်ကျရင် ဘယ်လောက်ရေကူးကျွမ်းပါစေ အသက်ရှင်ဖို့မလွယ်ဘူး။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးနေတာမို့ အသက်ကယ် အင်္ကျီဝတ်ထားလို့လဲ မရဘူး။ ဒါပေမယ့် ပရိတ်သတ်ကို အကောင်းဆုံးတွေ လုပ်ပြချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ မြင့်မြတ်နဲ့ယုန်လေးတို့ဟာ ရန်ကုန်မြစ်ထဲ အသက်နဲ့ရင်းပြီး သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။
ရုံတင်ရင်တော့ လာသာကြည့်ပေတော့ အမျိုးတို့ရေ " လို့လဲဆိုထားပါသေးတယ် ။
သရုပ်ဆောင်ရတာလွယ်တော့မလွယ်ဘူးနော် ... ဒီလို အသက်နဲ့ ရင်းပြီးတောင် သရုပ်ပီပြင်ဖို့ ကြိုးစားလို့ မြင့်မြတ်ဟာ စွယ်စုံရအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာတာဆိုလဲ မမှားပါဘူး ။ Video File လေးပါတင်ထားပေးပါတယ် ။
Source : Original Gangster
Original Gangster2ရိုကျကူးရာမှာ မွငျ့မွတျတဈယောကျရထေဲပွုတျကခြဲ့တယျလို့ဆိုပါတယျ ။
Original Gangster2ရဲ့ Offical Page က ထို Video ကိုတငျထားပေးခဲ့တာဖွဈပါတယျ ။
"သငျသိပါသလား? ရနျကုနျမွဈလိုရရှေငျမှာ ရထေဲပွုတျကရြငျ ဘယျလောကျရကေူးကြှမျးပါစေ အသကျရှငျဖို့မလှယျဘူး။ ရုပျရှငျရိုကျကူးနတောမို့ အသကျကယျ အကငြ်္ီဝတျထားလို့လဲ မရဘူး။ ဒါပမေယျ့ ပရိတျသတျကို အကောငျးဆုံးတှေ လုပျပွခငျြတဲ့စိတျတဈခုတညျးနဲ့ မွငျ့မွတျနဲ့ယုနျလေးတို့ဟာ ရနျကုနျမွဈထဲ အသကျနဲ့ရငျးပွီး သရုပျဆောငျခဲ့ကွတယျ။
ရုံတငျရငျတော့ လာသာကွညျ့ပတေော့ အမြိုးတို့ရေ " လို့လဲဆိုထားပါသေးတယျ ။
သရုပျဆောငျရတာလှယျတော့မလှယျဘူးနျော ... ဒီလို အသကျနဲ့ ရငျးပွီးတောငျ သရုပျပီပွငျဖို့ ကွိုးစားလို့ မွငျ့မွတျဟာ စှယျစုံရအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈလာတာဆိုလဲ မမှားပါဘူး ။ Video File လေးပါတငျထားပေးပါတယျ ။